Kismaayo News » War hadda soo dhacay: Dib u shaandhayn lagu sameeyay wasiirada Jubbaland
War hadda soo dhacay: Dib u shaandhayn lagu sameeyay wasiirada Jubbaland
Dikareedata oo ka soo baxday xarunta madaxtooyada Jubbaland oo Axmed Madoobe ku sixiixan yahay ayaa lagu magacaabay 11 wasiiro oo isugu jira kuwo cusub iyo kuwa hore laakiin loo kala badalay wasaaradaha.
Waxaa xusid mudan in wasiiradani ay kamid yihiin aqoonyahanno Soomaaliyeed kuwaasi oo ka miisaan culus golihii wasiirada ee hore.
Wareegtada kadiska ah ee Axmed Madoobe dib isugu shaandhayn ku samayeeyay golihiisa wasiirada ayaa ku soo aadaysa maalmo ka hor safar uu ugu baxayo dalka dibaddiisa, asagoo ka soo qayb gali doona shirka Soomaalida loo qabanayo ee ka dhacaya magaalada Brussels ee dalka Biljamka. Hadaba halkan hoose ka akhriso dikareetada;
Jubbaland: Farmaajow godobi waa wiish!
Kheyre oo ceyriyay wasiirkii Awqaafta iyo arimaha diinta
Natiijada safarka Abey Ahmed ee Asmara
Abey Axmed oo u tagay Isiyas Afawarqe
Farmaajo oo ka qayb galay shirka madasha Afrika iyo Shiinaha